Telecom - Jiangsu Hengyun Power Technology Co., Ltd.
matoorrada Power waxaa intooda badan codsatay xarumaha isgaarsiinta ee adeegyada isgaadhsiinta. Sida caadiga ah, matoor dhigaya 800KW ayaa loo baahan yahay xarun goboleed, iyo matoor dhigaya 300KW in 400KW loo baahan yahay saldhigga degmada, sida awood heegan. Waayo, magaalada ama gobolka saldhigga, 120KW oo hoos ayaa loo baahan yahay, inta badan sida xoogga Ra'iisul.
Auto bilowga iyo loading auto
dib markii la helo amarka bilowga, mishiinka kor u bilaabi doonaa si toos ah, iyada oo 99% saamiga guusha. Bilow A weelasha goobo saddex isku day bilaabatay. Muddada u dhaxaysa laba isku day bilowga waa 10 ilaa 15 ilbiriqsi.
Ka dib guul bilowdo, markii cadaadis saliidda gaadho qiimaha go'an, mishiinka si toos ah ku shuban doonaa. Waqti load sida caadiga ah waa 10 ilbiriqsi.
Ka dib markii saddex jeer ee xawaaladaha failure, mashiinka siin doonaa warbixinta alarm, markaasuu siin doonaa amarka ku bilaabatay set matoor heegan kale, haddii ay jiraan wax.
Auto la joojiyo
Marka la helo amarka joogsiga, mishiinka si toos ah joojin doonaa. Waxaa jira laba nooc: stop caadiga ah iyo stop degdegga ah. Stop caadiga ah waa in la joojiyo awoodda (oo markaas jebin ku biiro hawada ama si weyn beddelato ATS). Stop degdegga ah waa in la gooyaa korontada iyo shidaalka isla markiiba.
mashiinada waxay leeyihiin ilaalinta cadaadis saliid hooseeyo, in ka badan danab, in ka badan xawaaraha, dollar, circuit gaaban iyo la'aanta wajiga. Waayo, mashiinada biyaha la qaboojiyey, sidoo kale ilaalinta biyaha sare heerkulka waxaa la siiyaa iyo ilaalinta dhululubo sare heerkulka for mashiinada hawada-qaboojiyaa.
Mashiinka wuxuu bixiyaa nidaam hago, la socodka xuduudaha hawlgalka waqtiga dhabta ah iyo dawladda. Marka aan caadi ahayn ama unu halis ah ku dhacaan, mishiinka siin doonaa alaarmiga. maamuuska isgaarsiinta Standard waxaa lagu bixin karaa.
Waxaa la ogaaday karaa ATS auto biiro dhexeeya muhiimsan iyo matoor ama inta u dhaxaysa labo danab. Sidoo kale, laba ama ka badan oo la mid ah model matoorrada la barbar karo si loo hubiyo in awood weyn. The state ratio xeerka xawaare deggan yahay inta u dhaxaysa 2% iyo 5%. Xeerarkii danab gobolka deggan yahay gudahood 5%.
Altitude height 3000 mitir oo hoos. Heerkulka xadka hoose -15 ° C, xadka sare ee 40 ° C
waxqabadka 5.Stable & isku halaynta sare
Failure Celceliska aan bareeg ka yar 2000 saacadood
gami 6.Convenient iyo ilaalinta
nidaamka gami bannaanka taangiga shidaalka Large la xiri karo, taageeridda 12 saacadood ilaa 24 saacadood qalliinka.
matoorrada awood fiican, oo leh PLC-5220 module gacanta iyo ATS, hubaal korontada degdeg ah waqti isku mid ah ugu weyn ee ka dhammaatay.
Wax soo saarka set oo dhan oo u soo jeesan-muhiimka ah caawimaad xal macaamiisha isticmaalaan mishiinka si fudud oo aan aqoon farsamo badan. Mashiinka waa fududahay in la isticmaalo iyo sii wadida.
Nidaamka xakamaynta waxa uu leeyahay shaqo AMF, oo auto bilaabi kartaa ama joojin mishiinka. In degdeg ah mishiinka siin doonaa qaylo iyo joojin. ATS waayo doorasho. Waayo, mashiinka KVA yar, ATS waa lagama maarmaan.
Qaylada Low. Heerka buuq ah mashiinka KVA yar (30kva hoose) waa hoos 60dB (A) @ 7m.
Qaab deggan. Celceliska bareeg failure ma aha wax ka yar 2000 saacadood.
Size Compact. Qalabka Optional la siiyaa shuruudo gaar ah hawlgalka deggan qaar ka mid ah meelaha qabow lagu keydsho iyo gubanaya meelaha kulul.
Waayo, si bulk, design caadada iyo horumarinta waxaa la siiyaa.
Sdec Marine Diesel Generator, Marine Diesel Generator Manufacturers, Sdec Marine Diesel Generators, Marine dhaliyaha Shirkado cusub , Marine Generators For Sale,